नेपालको ओडिआई मान्यताको एक वर्ष : सफलता,चुनौती र संभावना | Hamro Khelkud
नेपालको ओडिआई मान्यताको एक वर्ष : सफलता,चुनौती र संभावना
त्यो खुसी, त्यो क्षण, नेपाली क्रिकेटकै एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अर्थात गत वर्ष नेपालले आजकै दिन एक दिवसिय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडिआई) मान्यता प्राप्त गरेको थियो ।
गतवर्ष मार्च १५ कै दिन जिम्बावेमा भएको ओडिआई विश्वकप छनोट अन्तर्गत नेपालले पपुवा न्युगिनिलाई ६ विकेटले पराजित गर्दा र अन्य खेलको नतिजा आफू अनुकुल आएपछि पहिलो पटक चार वर्षको लागि अोडिअाई मान्यता पाएको थियो । वान डे मान्यता पाएको एक बर्षमा नेपालले ६ ओडिआईमा समान ३ मा जित र हार बेहोरेको छ । यसक्रममा नेपालले नेदरल्यान्डसँग २ र युएईसँग ४ खेल खेल्यो ।
अब नेपालको सपना सन् २०२० मा अष्ट्रेलियामा हुने टी–२० विश्वकप, सन् २०२३ हुने एकदिवसिय विश्वकप तथा १०-१५ वर्षमा टेष्ट मान्यता प्राप्त गर्नु हुनेछ । तर अहिले घरेलु संरचना र तयारी हेर्दा टेस्ट मान्यताको कुरा छाडौं चार वर्षको लागि प्राप्त गरेको अोडिअाई मान्यता पनि खोसिने डर छ । जसको लागि उचित तयारी थाल्न ढिला भईसकेको छ ।
एक वर्षमा ६ ओडिआईको नतिजा
ओडिआई क्रिकेटमा नेपालले गत अगस्ट १ मा नेदरल्यान्डसँग डेब्यू गरेको थियो । कमजोर ब्याटिङका कारण नेपाल डेब्यूमै ५५ रनले पराजित भयो । अगस्ट ३ मा नेदरल्यान्डमाथि अन्तिम बलमा १ रनको रोमान्चक जित हात पार्दै २ खेलको श्रृंखला १–१ को बराबरीमा सकायो । जुन ओडिआईमा नेपालको पहिलो जित थियो । त्यस्तै एसिया कप छनोटअन्तर्गत अगस्ट ३० मा नेपाल र युएईबीचको खेलले पनि ओडिआई मान्यता पायो । उक्त खेलमा पनि नेपाल ७८ रनले पराजित भयो ।
गत जनवरी २५ मा तीन खेलको अोडिअाई सिरिजअन्तर्गत पहिलो खेलमै ३ विकेटले पराजित भएको नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै सिरिजमा कब्जा जमायो ‌। जनवरी २६‌ मा भएको दोस्रो ओडिआईमा १ सय ४५ रन र २८ जनवरी तेस्रो खेलमा यूएईलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै सिरीज २–१ ले कब्जा गर्यो ।
एक वर्षमा नेपालको सफलता
ओडिआई मान्यता पाएको एक वर्षमा धेरै सफलता र केहि असफलता रह्यो । यूएईसँगको वान डे सिरिज जित्ने देखी लिएर रोहित कुमार पौडेलको कीर्तिमानी अर्धशतकलाई सफलता मान्नुपर्छ । यूएईलाई तीन ओडिआई श्रृंखलामा २–१ ले हराउँदै पहिलो सिरिज जित्नु मुख्य सफलता रह्यो । त्यस्तै पहिलो पटक आईसीसीको ओडिआई वरियतामा समावेश हुनु र यूएईसँगको दोस्रो खेलमा युवा खेलाडी रोहितले ५५ रन बनाउँदै क्रिकेटमा भगवान मानिने सचिन तेन्दुलकरको रेकर्ड तोड्दै अर्धशतक बनाउने कान्छा खेलाडी बन्नु पनि थप सफलता हुन् ।
ओडिआई मान्यता पाएसँगै नेपालले टी–२० अाई मान्यता पनि प्राप्त गर्दै युएईलाई नै २–१ ले हराउँदै पहिलो टी२० सिरीज जित्नु पनि अर्को सफलता मान्नु पर्छ । सोमपाल कामीले एकै खेलमा लिएको पहिलो पाँच विकेट, कप्तान पारस खड्काको विजयी शतक,ज्ञानेन्द्र मल्लको उत्कृष्ट फिल्डिङ ओडिआईका थप उत्कृष्ट क्षण हुन् ।
भावी चुनौती :
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यानं) तीन वर्ष यता आईसीसीको निलम्बनमा छ । हरेक कुरा आईसीसीसँग निर्भर रहनु पर्ने नेपालको बाध्यता बनेको छ । वान डे मान्यता पाएको एक वर्ष पुग्दापनि घरेलु मैदानमा सिरिज हुन सकेन । यो नेपाली क्रिकेटका लागि दु:खद पक्ष हो । नेपाली क्रिकेट समर्थक र खेलाडी घरेलु मैदानमा सिरिजको पर्खाईमा छन् । तर,क्यान नहुँदा तत्कालको अवस्थामा नेपालमा सिरिज हुने संभावना छैन । आईसीसी नेपाली क्रिकेटको क्रेज देखेरनै दुई पटक टियू मैदान निरिक्षण गरिसकेको छ । अन्य देशको तुलनामा आईसीसीले नेपाललाई हेर्ने दृष्टकोण पनि सकरात्मक देखिन्छ ।
ओडिआई सिरिजको लागि पहिला टियू क्रिकेट मैदान थप निमार्ण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा पहिलो ओडिआई सिरीज गराउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । क्यान नभएको अवस्थामा आगमी मे मा इंग्ल्यान्डमा हुन लागेको एक दिवसिय विश्वकप अघि आईसीसीले नेपालमा सिरीज गराउने संभावना देखिदैन । विश्वकप पछि पनि अनिश्चितनै छ ।
यति मात्र होइन,नेपालले एक वर्षमा जम्मा ६ वटा ओेडिआई खेल खेल्यो । औसतमा २ महिनामा १ ओडिआई खेल पर्दछ । नेपालले बर्षमा ६ मात्र नभएर अन्य देशसँग सहकार्य गरेर यो भन्दा बढि खेल्न सक्नुपर्दथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । ६ मध्ये ३ ओडिआईमा नेपाल पराजित भयो । जसको प्रमुख कारण कमजोर ब्याटिङ नै रह्यो । यसमा कसैको दुईमत छैन । हुन त ओडिआई मात्र होईन नेपाल पराजित हुने अधिकांश खेल कमजोर ब्याटिङकै कारण हुने गर्दछ । नेपाली क्रिकेटलाई अब नयाँ उचाई दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रशिक्षकलाई दिर्घकालीन नियुक्ति दिन आवश्यक छ । अहिलेको नेपाली क्रिकेटको मुख्य आवश्यकता पनि यहि हो । तर क्यान नभएको अवस्थामा यो पहल कसले गर्ने ? आफैंमा प्रश्न छ ।
वर्तमान अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय खेलको लागि आईसीसीले प्रतियोगिता वा सिरिज हुनु केहि दिन अघि ब्याटिङ प्रशिक्षक पठाउँने गरेको छ । तर १०-१५ दिनमै ब्याटिङ समस्या समधान हुन त के ब्याट्सम्यानको समस्या पत्ता लगाउन पनि कठिन पर्दछ । वान डे मान्यता प्राप्त देशमा एउटा एक दिवसिय वा दुई दिवसियसम्मको प्रतियोगिता हुन सकेको छैन । टी–२० प्रतियोगिताकै भरमा वान डे खेल्न र जोगाई राख्न आफैमा कठिन र चुनौती छ । नेपाली क्रिकेटमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को नयाँ खेलाडी आएका छन् । जसको लागि नेपालले ए र बी टिम बनाउँदै प्रतिस्पर्धा अझ बढाउन आवश्यक छ । जसले गर्दा नेपाली क्रिकेट टोली थप बलियो बन्ने छ । तर क्यान नभएको अवस्थामा यो पनि संभव देखिदैन ।
नेपाली क्रिकेटको भविष्य उज्वल देखिन्छ । नेपाली खेलाडीले अबको १५ वर्ष भित्र टेस्ट मान्यता पाउने सपना त्यसै देखेका होइनन् । खेलाडीमा त्यो क्षमता छ । विश्व क्रिकेट जगतामा नेपाली खेलाडीले आफ्नो क्षमता देखाउने यो राम्रो अवसर हो । कम्तिमा पनि अझै तीन वर्ष नेपाली क्रिकेटले पछि फर्केर हेर्नुपर्ने छैन । ३ वर्षमानै नेपालले आफ्नो भविष्य सुनश्चित गर्न सक्छ । केन्या जस्तो बन्ने की अफगानिस्तानको रफ्तारमा अघि बढ्ने भन्ने पनि यो तीन वर्षको प्रर्दशनले निर्धारण गर्ने छ ।
टेस्ट राष्ट्र जिम्बाबे,आयरल्यान्ड,अफगानिस्तान साथै एसोसियट टप राष्ट्र नेदरल्यान्ड,स्कटल्यान्ड नेपालमा आएर खेल्न लालायित छन् । तर क्यान नभएको अवस्थामा आईसीसीले व्यवस्थापन,सुरक्षा र मैदानको कारण देखाउँदै नेपालमा खेलाउन मानि रहेको छैन । विश्वकप पछि यी देशसँग आईसीसीले आफ्नै पहलमा नेपालमै सिरिज गराउन सक्ने संभावना छ । नेपालको लक्ष्य अब उच्च स्तरका टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न सके श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाबे, आयरल्यान्ड जस्ता टेस्ट राष्ट्रसँग वान डे र टी२० सिरीज खेल्न सक्ने संभावना पनि आगमी दिनमा त्यतिकै देखिन्छ ।
त्यसअघि नेपाली खेलाडीले आफ्नो प्रर्दशन र आईसीसी वरियतामा भने सुधार गर्न आवश्यक छ । हाल नेपाल वान डे वरियतामा १५ र टी २० वरियतामा १४ औं स्थानमा छ । पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटमा देखा परेका युवा खेलाडीले कमजोर ब्याटिङ समस्या समधान हुने संभावना पनि देखिन थालेको छ ।
खेलाडीहरुको एक्लो प्रयासमा नेपाली क्रिकेट यहाँ सम्म आईपुगेको छ,सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले निस्वार्थ भएर अघि बढ्ने हो भने नेपाली क्रिकेट कहाँ सम्म पुग्ला ? सबैले गम्भिर भएर एक पटक सोच्न आवश्यक छ ।